Esihlokweni sethu "Izindawo ezinhle kakhulu zokuphumula phesheya" sizokutshela ukuthi ungaba nokuphumula okuhle ngaphesheya. Ukukhetha indawo lapho ungakhululeka khona kuyadinwa futhi kuyinde, ngoba ufuna ukuchitha iholide elihle. Uma ungakanqamuli kulolu hambo, sizokusiza ukhethe izwe, futhi wembula izimfihlo zeholide yebhajethi phesheya. Inkinga yathinteka zonke izici zokuphila kwethu, kuhlanganise nokuphumula. Ngokwezibalo, ama-36% aseRussia ahlose ukusindisa ekuhambeni.
Izinguquko, nakuba zihamba, izindawo ezibizayo zase-Australia naseYurophu zikhohliwe, abantu bethu bahlola imizila yesabelomali. Konke lokhu kuhle, ngoba ngisho nasesifundeni sakho ungathola izindawo ezinhle nezinhle kakhulu zokuphumula.
I-Turkey ne-Egypt namanje zithandwa. Ukuphumula kuleli zwe ngokudla konke okubandakanya uzobe ushibhile kunamahhotela afanayo e-Anapa. E-Turkey ungakhetha indawo yokuhlala "ngokusho kwezidingo zakho".
E-Antalya nase-Alanya, iholidi lomkhaya elingabizi.
I-Marmalis iyindawo yokuhlala yentsha ehlala impilo yobusuku.
Lapho ungaphuma khona ngaphandle
I-Kemer ne-Bodrum - lezi zindawo zokungcebeleka zihloswe kubantu abanezinga eliphezulu lokuthola imali, abaneminyaka emaphakathi.
Uma ukhetha ekupheleni kwehlobo, lapho ungaya khona eTurkey noma eGibithe, ungakhohlwa ngesimo sezulu uma uhlela iholidi lakho nezingane. Ngo-Agasti, eGibhithe, izinga lokushisa lifinyelela kuma-degree angu-50. Ukushisa ngandlela-thile kusiza ukubekezelela isimo sezulu esomile, kodwa ukuvakasha, isibonelo, kuLuxor, kunabantu abadala kuphela nabantu abanempilo.
Kodwa uma ekupheleni kuka-Agasti ufika eGibithe, ungaphuthelwa inkathi yemango, lesi sithelo emakethe yezitolo sithengiswa "siphilile" ngendlela yeziphuzo ezinzima.
Ukushisa eTurkey kuza ngoJulayi, ngo-Agasti kuqala kancane kancane. Ukuze uthole iholidi eTurkey, isikhathi esihle kakhulu ngo-September . Ukushisa kolwandle kuphakeme ngokwanele, ukushisa kunciphisa. Ngemva kokushona kwelanga, ulwandle lunikeza imfudumalo, ngakho-ke ngoSepthemba ubusuku bukaSeptember buhlala emigwaqweni emnandi kakhulu futhi efudumele kakhulu.
Isimo sezulu sincike endaweni. Ogwini olusentshonalanga, oluvulelekele emiphakathini yasenyakatho, lubi kakhulu kunogwini oluseningizimu. Emgodini we-Aegean, isimo sezulu sishaya kancane kunogwini lwaseMedithera, ngakho-ke kuyoba lula ukudlulisa ukushisa.
Ububanzi bezintaba kusukela emoyeni kuvaliwe ogwini oluseningizimu, izinga lokushisa lapha livame ukufika ku-45 degrees of heat. Uma unenhlanhla, ungathola izinkambo ezivuthayo eGibhithe naseTurkey ukusuka ku-$ 200-300 kuya emahoreni kusuka ku-4 kuya ku-5 izinkanyezi.
Abaphikisi bezinkathi zasogwini abathandi la mazwe futhi ngeze. Amapiramidi aseGibhithe, iTroy, iKapadokiya, ihlane, iSinayi, iTurkey Istanbul izokunika izinto eziningi ezingenakulibaleka.
ETunisia, eMontenegro naseCroatia
I-Montenegro neTunisia, eCroatia, nayo iyathandwa kakhulu. I-Tunisia yilanga laseMedithera, amabhishi asolwandle, i-thalassotherapy futhi iyaziwa kakhulu kuwo wonke amahhotela ase-Yurophu. Isimo sezulu lapha sisedlula kunaseGibhithe. Eduze enhloko-dolobha, imizi "tusovochnye" - uHamametet no-Sousse. Siyajabula, idolobha elincane laseMahdia, elinamabhishi angcono kunazo zonke ezweni, kuhle ukuholwa komndeni.
Amaholide kubantu abasha phesheya
I-Croatia ne-Montenegro - lokhu kuyindlela engcono kakhulu, ofuna ukuhlanganisa isabelomali iholide, i-beach ne-Europe. Ungakwazi ukundiza lapha ngokuzenzekelayo, ngoba amaRussia lawa mazwe ayi-visa-free. Laba bavakashelayo abathanda amabhishi ase-sandy futhi baphumule nezingane, badinga ukukhetha indawo yokubhuka ngokucophelela.
Amagquma aseCroatia angamadwala ahlanganiswe nehlathi. Enyakatho yeCroatia yi-Istria. Kupholile futhi kunzima kunawo wonke ogwini. Amabhishi ase-Istrian amatshe nama-slabs. Eningizimu ye-Istria yiDalmatia.
EDalmatia yi-Makarska Riviera resort eyaziwa kakhulu. ENingizimu Dalmatia, kanye nasenhloko-dolobha yayo, amahhotela amaningi nezinkanyezi ezingu-4, nezinkanyezi ezingu-5.
Uma uya eningizimu, khona-ke uzoya kuBicici, akusikho umsindo omkhulu, amabhishi ayenziwe ngamatshe amatshe. Ugu oluphakathi kwamadolobha akwaBar no-Sutomore lubhekwa njengendawo yesabelomali. Kunamabhishi amaningi enhlabathi futhi eziningi izindlu ezishibhile. Izivakashi ezisebenzayo ezikhetha amahhotela angu-3-star zikwaziswa ngabahambi abanolwazi ukuthi bangathathi "konke okubandakanya", kodwa kwasekuseni kuphela noma "kwasekuseni-dinner".
Ngenxa yokuthi ukudla okunjalo kwamahhotela akufanelekile imali enikeziwe, futhi abakwazi ukuziqhenya ngenkonzo yaseYurophu. Emadolobheni kukhona izindawo zokudlela ezishibhile eziningi nezindawo zokudlela ezinhle.
E-Croatia kulo nyaka ukwakhiwa kwenethiwekhi ye-autobahns sekuphelile, ngakho-ke noma yikuphi ukuvakasha kungafinyelela noma iyiphi idolobha elikude lezwe.
Ukuthandwa kweGrisi kukhula, lokhu kuyindlela enhle kulabo abafuna ukuhlanganisa amaholide asebhishi kanye nokuvakasha. Indawo eyintandokazi yaseRussia yinqaba yeHalkidiki, kunomlando ocebile kanye nesimo sezulu esihle kakhulu. Akungaphansi kwelesi siqhingi, Rhodes, Cyprus, Crete, Corfu.
Ungakwazi ukuya eGrisi ngokuya enyakatho kuya eTheski, nase-Athene, bese emva kokuvakasha, ungathola isikebhe eziqhingini. Kukhona futhi izindiza ezihamba ngokuqondile zendiza eziya ngqo eCyprus, eKrethe njalonjalo.
I-Cyprus iqala izinhlobo zokuzilibazisa ezinjalo, okungazithokozela unyaka wonke: ukuvakasha kwamakhompeli, iwayini ne-gastronomic tours, izikhungo zokwelapha. Izindaba ezimnandi kuyinkqubo ye visa elula, cishe izinsuku ezintathu. E-Cyprus, i-visa ikhishwa usuku olulodwa futhi ikhululekile.
ESpain, eBulgaria naseRomania
Ngesikhathi sokuqala kwenkinga, ukugeleza kwezivakashi ezivela eCIS yangaphambili kwagijimela eRomania naseBulgaria. IBulgaria iyizwe elihle kakhulu emndenini, iholidi eliphumuzayo, yilapho okufanele ujabule khona.
Ugu lwaseBulgaria luhamba ngamakhilomitha angu-400. Enyakatho yezindawo zokungcebeleka kwezwe zimelela imizi eyakhelwe ngamabhishi ase-sandy, lokhu kuyi-Golden Sands, eRusalka, i-Albena, ikakhulukazi amahhotela lapha kunenkanyezi engu-3 no-4, nezinkanyezi ezimbili no-3.
Eningizimu kukhona izindawo zokubhuka ezinkulu, nazo zonke izinkanyezi - i-Sunny Beach, kunezindawo lapho kuhlala khona amahhotela amaningi ashibhile - iSozopol. Abanye lapha kanye nemifula lapho ama-capes amadwala ehlukile khona ngama-cove enhlabathi.
Uma ufuna ukusindisa, thatha ibhasi, kuzokubiza ngaphansi kwama-dollar angu-100 kuya kwangu-150.
Ukuvakasha kwebhajethi kuvaliwe eSpain, lapha, ngaphezu kwezinkambo ezivuthayo, uhlelo "Fortune" lungatholakala nezindlela ezishibhile ezithakazelisayo. Ungaqasha wena ikhaya elihamba ngamakamelo okulala kanye namagumbi okugeza. Abantu abane ngesonto kuzokukhokhela ama-euro angu-970. Ungaya eSicily futhi uqashe indawo yokuhlala yezokuvakasha, i-250 euros umuntu ngamunye ngesonto.
Kulo nyaka, abaningi banquma, uma kunzima, khona-ke sizoya "kithi."
Izakhiwo zokuzilibazisa zendabuko kubantu bakithi, njengeSudak, Sochi, eCrimea, e-Anapa, nazo zaphakamisa amanani. Kodwa uma ukhetha i-Crimea ne-Krasnodar Territory, abaphathi bebhizinisi lezokuvakasha bayeluleka:
1. Ukuya ezindaweni zethu zokungcebeleka, kusengaphambili, amahhotela amahhotela namahhotela, kuzokubiza kancane.
2. Sula ulwandle namanani aphansi e-Abkhazia, umuntu ngamunye ngosuku egibele izindlu ubiza ama-ruble angu-250. Akukho ndawo yokuphuma. Lona indawo yokuphumula okulinganisiwe.
Kodwa ulwandle akuyona into yonke. Ukuphakama okukhulu kwazuzwa ukuhamba, ukuvakasha kwi-Ring Ring. Phela, hhayi kuphela olwandle ongashukuma, abantu bafuna ukuya e-Altai, eSeliger naseLeningrad esifundeni.
Kukhona nemifula emifula emgqeni waseRussia Central nge-rapids esifundeni sasePoozersky, amachibi athule futhi azinzile esifundeni saseVsevolozhsk. Kukhona ogwini olwandle eGulf of Finland kanye namanci amadala phakathi kwamapaki amahle endaweni yesifunda saseLomonosov.
Kwakukhona izindiza eziqondile eqenjini lePutukezi iTAP Moscow - Lisbon. Eminye yonke ePortugal yaba yithengeka kakhulu, amanani akhona ayalinganisa.
Ungakwazi ukuphumula eThailand. I-Flight Moscow - Bangkok izokukhokhela ama-dollar angu-550 kuya ku-570. Kukhona ibhasi elikhululekile ukusuka eBangkok kuya ePhuket for $ 30.
Uma ubheka, ungathola indawo yokuhlala ku-3 noma 4-izinkanyezi, igumbi elibili ngosuku uzodola u-$ 30. Uma ubala, khona-ke bonke abaseThailand bazokukhokhela u-$ 1000.
Manje siyazi ukuthi yiziphi izindawo ezingcono kakhulu zokuphumula ngaphandle, ungakhetha izwe ongathanda ukuya kulo, futhi ulondoloze ekuhambeni.
Isimo sezulu eMoscow nasesifundazweni saseMoscow ngo-Okthoba 2017, isibikezelo esinembile kakhulu se-Hydrometeorological Center
Ukuya eziqhingini zeCanary
Uzophi lapho kuNyaka Omusha Ka-2014?
Isimo sezulu eCrimea ngoJulayi 2016. Kuyini isimo sezulu esikulindeleke eCrimea ngokusho kokubikezela nokubuyekezwa kwezivakashi?
Dance Lezginka - umoya oshisayo weCaucasus
Ukuqhuma kusuka iklabishi
Shintsha impilo yakho nge isongo ngobuhlakani ONETRAK!
Ukudla ngendlela ye-hussar
Ukunakekelwa kwezinyosi zasebusika kanye nokunakekelwa komzimba omuhle
Izimfihlo zokudonsa striptease kumuntu othandekayo
Iphupho, iyiphi inyoni emhlophe ephuphayo
Ithonya lomculo ekuthuthukiseni ngokomzimba izingane
Ayikho i-orgasm yesifazane
Siyakuhalalisela ngoSuku luka-Valentine ngoFebruwari 14, 2017 ngithandane lami ethandekayo nomyeni, intombi yami ethandekayo nentombi - ku-prose nevesi
Ukushintsha imibhangqwana eshadile